कोरोना भाइरस औषधि: डेक्समेथासोन (Dexamethasone) जीवन बचाउने पहिलो औषधि साबित भयो
अन्तर्राष्ट्रिय कोरोना भाइरस औषधि: डेक्समेथासोन (Dexamethasone) जीवन बचाउने पहिलो औषधि साबित भयो
डेक्समेथासोन, एक सस्तो र उपलब्ध औषधि, कोरोना भाइरस संक्रमित गम्भीर बिरामी बिरामीहरूको जीवन बचाउन सहयोग गर्न सक्छ।
बेलायतका विज्ञहरू भन्छन कि यो औषधीको थोरै मात्रामा प्रयोग कोरोना विरुद्धको लडाईमा ठूलो सफलताको रूपमा आएको छ।
गम्भीर बिरामी परेको कारण भेन्टिलेटरको सहारा लिनु पर्ने बिरामीहरू, यस औषधिको कारण तिनीहरूको मृत्युको जोखिम लगभग एक तिहाईले घटेको छ। जो अक्सिजनको खाँचोमा छन्, मर्ने जोखिम एक पाँचौंले कम गरिन्छ।
डेक्सामेथासोन सन् 1960 को दशकदेखि गठिया र दमको उपचारमा प्रयोग गरिएको औषधि हो। आधा कोरोना बिरामीहरू जसलाई भेन्टिलेटरहरू चाहिन्छ बाँच्न असमर्थ छन्, त्यसैले यस जोखिमलाई एक तिहाइले घटाउनु ठूलो सफलता हो।
अन्वेषकहरूको अनुमान छ कि यदि यो औषधि बेलायतमा संक्रमणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै प्रयोग भएको भए करिब 500 व्यक्तिको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो। यो औषधी सस्तो पनि भएकोले यसले गरीब देशहरूका लागि लाभदायक हुन सक्छ।
यो औषधि पनि परीक्षणको एक अंश हो जुन हालका औषधिहरू जाँच गर्न भइरहेको छ कि यी औषधीहरू कोरोनामा पनि प्रभावकारी छन् कि छैनन् भनेर।
उच्च जोखिम बिरामीहरूका लागि उपयोगी
कोरोनका २० बिरामीहरूमध्ये 19 जना अस्पतालमा भर्ना नभई निको भइरहेका छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका धेरै बिरामीहरू पनि ठीक भइरहेका छन्, तर त्यहाँ केही बिरामीहरू छन् जो अक्सिजन वा भेंटिलेटरको खाँचोमा छन्। यो औषधीले उस्तै उच्च जोखिम भएका बिरामीहरूलाई मद्दत गर्दछ।
यो औषधि पहिले नै सूजन कम गर्न प्रयोग गरिएको छ र अब यस्तो देखिन्छ कि यसले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। जब शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक सक्रिय प्रतिक्रिया गर्दछ तब यस्तो अवस्थालाई साइटोकाइन आँधी भनिन्छ, यो घातक हुन सक्छ।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको एउटा टोलीले २००० बिरामीहरुलाई अस्पतालमा भर्ना गरी यो औषधी दियो र त्यसपछि 5000 बिरामीहरु लाई तुलना गर्यो जसलाई औषधि दिइएन।
भेन्टिलेटरको सहयोगमा बाँचेका बिरामीहरूले औषधीको मृत्यु हुने जोखिम 40०% बाट 28% सम्म घटाए, र अक्सिजन चाहिनेहरूले उनीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना 25% बाट २०% घटाए।
टोलीका प्रमुख अन्वेषक प्रोफेसर पीटर होर्बीले भने, “यो एकमात्र औषधि हो जसले मृत्युदर घटाएको छ र यो कटौती यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो महत्वपूर्ण छ। यो एक ठूलो सफलता हो।”
आज कोरोना संक्रमित कति थपिए , घटे कि बढे ? (संख्या सहित)
मुलुकमा थप ३ हजार ९३ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
यी दुई जिल्ला आजदेखी पूर्ण रुपमा बन्द गरिदै…
संक्रमणको जोखिम बढेपछि काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा स्थगित गरेका छन् ।
कञ्चनपुरमा एउटी १४ वर्षकी बालिकालाई ६ जनाले एउटा कोठामा ५ दिन सम्म राखे । आफुले मन पराएको एक जना युवकले उनलाई बोलाएका थिए ।
आज कोरोना संक्रमित कति थपिए , घटे कि बढे ? (संख्या...